Ny fampiharana Android telo tsara indrindra hihaonana amin'ny olona vaovao | Androidsis
Ny fahatongavan'ireo tambajotra sosialy dia dingana iray lehibe raha ny amin'ny fihaonana amin'ny olona, ​​ka nanamora ny fizotrany ho an'ny olona maro. Na dia misy aza ny mpampiasa maniry mifanena amina olona ivelan'ny faribolanao olom-pantatrao. Ny ampahany tsara dia mbola misy vitsivitsy amin'ireo rindranasa karazana an'ity karazana ity ho an'ny telefaona Android.
Noho izany, etsy ambany dia mamela anao hisafidy anao izahayNy sasany amin'ireo rindranasa tsara indrindra ho an'ny Android hihaona amin'ny olona. Ka raha mitady hihaona amin'ny olona vaovao ianao dia mety mahasoa ny sasany amin'ireo rindranasa ireo na te hahalala azy ireo fotsiny ianao noho ny fahalianana te hahafanta-javatra.
Tokony holazaina, amin'ny alàlan'ny fanazavana, fa ireo fampiharana ireo tsy miasa ho solony amin'ny fampiharana hafa toa ny Tinder na Badoo izy ireo. Na dia malaza amin'ny Android aza ireo rindranasa ireo dia hafa ny tanjon'izy ireo amin'ny ankamaroan'ny tranga. Satria mitady fihaonana ara-nofo ny mpampiasa. Amin'ity tranga ity, ireo izay asehonay etsy ambany dia fangatahana hihaona amin'ny olona.
1 Tavoahangy - Hafatra anaty tavoahangy
2 Fifanakalozana fiteny tsy mitongilana
3 MeetMe: Miresaka sy namana vaovao
Tavoahangy - Hafatra anaty tavoahangy
Manomboka amin'ny iray amin'ireo rindranasa voalohany indrindra misy izahay mikasika an'io. Satria nahavita namorona foto-kevitra tany am-boalohany izy ireo izay mampiavaka azy amin'ny hafa eny amin'ny tsena ankehitriny. Izahay dia misoratra anarana amin'ny rindranasa izay hihaonantsika amin'ireo mpampiasa hafa izay mitovy ny tsirony amin'ny anay. Raha izany dia, azontsika atao ny mandefa hafatra ao anaty tavoahangy ho an'ilay olona tianay hihaona. Hosoratanay ny hafanay ary halefa any amina olona iray. Na dia amin'ity fampiharana Android ity aza dia afaka mamaky ny tavoahangy nalefa ny rehetra.
Io no mampiavaka azy, na dia mety tsy tian'ny maro aza izany. Izay rehetra alefanao dia ampahibemaso amin'ny fampiharana. Raha mamaky ilay hafatra eo amin'ny tavoahangy ilay olona iray hafa dia hahazo fampandrenesana momba izany ianao. Ho fanampin'izay, afaka manara-maso ireo tavoahangy rehetra alefanay amin'ny fampiharana izahay.
Developer: Honi Inc.
Fifanakalozana fiteny tsy mitongilana
Ity rindranasa faharoa amin'ny lisitra ity dia manambatra zavatra roa izay azo antoka fa liana amin'ny mpampiasa maro. Araka ny Ho fanampin'ny fihaonana amin'ny olona ao aminy dia ho afaka hampihatra fiteny amin'ny fomba tsotra ianao. Satria afaka hifandray amin'ireo olona manana fahalianana mitovy aminao ianao, nefa mipetraka any an-tany hafa na miteny amin'ny fiteny hafa. Na dia tiantsika aza dia afaka miresaka amin'ireo mpampiasa miteny mitovy fiteny amintsika koa isika. Ny safidy roa dia azo atao.
Ity rindranasa Android ity dia misy fanohanana amin'ny fiteny maro, izay Alemanina, Espaniôla, sinoa, frantsay, anglisy ary japoney. Ka raha miteny amin'ireo fiteny ireo ianao dia safidy mety izany. Satria afaka mifampiresaka amin'ny fiteny maro miaraka amin'izay ianao. Ny teboka iray lehibe dia izany ny interface-ny dia mora ampiasaina. Ho mora aminao ny hifindra manodidina ny rindranasa sy hikaroka sy hiresaka amin'ireo mpampiasa hafa ao.
Miteny: Fifanakalozana fiteny
Developer: Ekipa miteny
MeetMe: Miresaka sy namana vaovao
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ity rindranasa hafa ity izay mety ilay manana vondrom-piarahamonina lehibe indrindra amin'ireo rindranasa Android telo hitanay androany. Satria misy mpampiasa mihoatra ny 100 tapitrisa ao. Mora ny mifanena amin'ny olona maro ao aminy, ary koa ny faritra maro samihafa eto an-tany. Zavatra mety hahaliana ny mpampiasa maro.
Na dia ny hiresaka amin'ny olona ao amin'ny faritra misy anao aza no tena tanjony, na dia afaka mifandray amin'ireo mpampiasa ao aminy aza izahay. Izany no zavatra tsara, afaka mifanena amina karazana olona maro ao isika. Inona koa, manana chat izahay ary koa miantso video ao anatiny ary afaka mamorona resaka anaty vondrona izahay miaraka amin'ny olona maromaro.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hifanena amin'ny olona
Fortnite for Android dia hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ity fahavaratra ity
Honor 10 dia amidy amin'ny andro voalohany any Eropa